‘साम्यवादको बाटो ‘ब्लक’ गर्ने क्षमता कांग्रेससँग छ’ – Online Khabar
२०७४ असोज ३० गते १६:०१
२०७४ असोज २६ गते १६:११
मैले नबुझेको कुरो के भने बाम एकतासँग किन का‌ंग्रेसी नेताहरु डराका हुन ? के अाफूमा विश्साष नभएर हो ?
सुरेन्द्र राई (दिवू)
२०७४ असोज २५ गते १२:२१
अव देश बनाउनु पर्छ । विकास जुर्मुराउनु पर्छ र त्यो अधिकार हामी आम जनताको हातमा सेकेण्डभरको लागि प्राप्त हुन गई रहेको छ । यस अति महत्वपूर्ण घडी सहि र निर्णयात्मक हुनु पर्छ । यस्तो अवसर सेकेण्डभरमा गुमेपछि ५(पांच) बर्षसम्म पश्चतापमा पर्नु सिवाय हामी जनतामा केहि बांकी रहने छैन । त्यसकारण आम जनताले उचित निर्णय लिनु सक्नु पर्छ । जनता पश्चतापमा पर्नु पर्ने कारणः 	कुनै पनि एउटा पार्टीको बहुमत नआएको खण्डमा स्थिर सरकार गठन हुन नसक्ने । विगतमा जस्तै मिलिजुली सरकार गठन र विघटनको कार्यले निरन्तरता पाइरहने । 	सरकार गठनमा पार्टीगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिने । 	विगतमा जस्तै पार्टीगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ हावी हुनाले राष्ट्रिय स्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कार्यान्वनमा नआउने । 	जसको कारण ५(पांच) बर्षसम्म विकासको सट्टामा दलहरुको सरकार गठन र विघटनको नाटक मात्रै हेरेर बस्न बाध्य हुनु पर्ने । 	जनताको सपना सधै अधुरो र अपुरै रहने । जनताको सपनाः 	देशमा विकास होस् । 	विकसित देशको सम्पन्न र सुखी जनता बन्न सकौं । 	हामीले त दुःख पायौं । हाम्रा भावी पुस्ताले दुःख नपाउन् । 	राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सधै अडिग हुन सकौं । 	राज्यले दिने सेवा सुविधा सहज रुपमा उपभोग गर्न पाऔं । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्नु पर्ने कुराहरुः 	कुनैपनि एउटा पार्टीको बहुमत आउने गरी राष्ट्रिय स्तरको बहसबाट मतदान गर्नु पर्ने । त्यसबाट एकल पार्टीको सरकार गठनको वातावरण सृजना गराउन सक्नु पर्ने । 	सरकार गठन पछि सरकारले गर्ने निर्णय र विकासतर्फ उन्मुख रहेको छ वा छैन त्यसको साथै विकासका अवधारणा के कस्तो छ मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । 	पुनः ५(पांच) बर्षपछि उक्त पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । 	यदि सरकारले ५(पांच) बर्षसम्म पनि जनताको अपेंक्षा अनुरुप पूर्वाधार विकासतर्फ उन्मुख हुन सके/नसकेको र राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति प्रतिबद्ध रहेको छ वा छैन । यदि जनताको अपेंक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः अर्को कुनै पार्टीको बहुमत आउने गरी राष्ट्रिय बहसबाट मतदान गर्नु पर्ने । 	अबको राष्ट्र निर्माण सेकेण्डभरको लागि जनताको हातको आएको छ । यसलाई सहि तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुमा नै जनताको बुद्धिमानी हुनेछ र राष्ट्र विकासतर्फ उन्मुख हुनेछ । 	दल र नेता मात्र दोषी हुने छैन । मुख्य दोषी त हामी जनता नै हुनेछौं । किनकि प्रतिनिधि छनौट निर्णयको अधिकार हामी जनताको पनि हो । 	त्यसैले हालसम्म दलहरुले गरेको कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा कुनै एउटा पार्टीलाई मतदान गरौं र राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी दिऔं । निर्णयात्मक मतदान गरौं र राष्ट्र निर्माणको अधिकार प्रयोग गरौं । जुन पार्टी देश र जनता प्रति सधै उत्तरदायी होस् । राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति सधै उत्तरदायी होस् । जनताले बिर्सनु पर्ने कुराहरुः 	नेताको पछाडि मात्र सधै लाग्न । 	आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्न । 	नाताबाद कृपाबाद । 	सानो उपहार वा पैसामा आफ्नो अमूल्य मत साट्न । 	कसैको डर वा धम्की/फुल्याईमा मतदान गर्न । मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगेपछि मैले राष्ट्र निर्माण र जनताको न्युनतम् आधारभूत आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने पार्टी र सरकारको छनौट गर्दैछु । मेरो एक भोटले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरालाई शिरोधर गर्न सक्नु पर्छ ।
२०७४ असोज २५ गते ११:५२
सिट्टैलाका सित्तै गएका कुराहरु मात्र । अरु मिलेका नमिलेका के कुरा गर्नु । आफ्नो पार्टीमा भएका कमी कमजोरी हटाउनेतिर लाग्दा नै यी कांग्रेसी भनाउँदाहरुका लागि राम्रो हुने थियो कि । पहिला आफ्नो आङ्गको भैंसी देख्नुपर्यो अनि अरुको जुम्रा हेर्नु नि ।
२०७४ असोज २५ गते ११:४८
Krishna ji Tarsinu parne hoina , Sabai communist party le samajbad hudain samyabad nai bhaneka chhan ,Ekikrit communist party banaunda pani tyahi bhaneka chhan , tara 10 barsa ma samyabad lyaune bhanera6budema bhaneko chhaina , yo jhuto bolubho .
प्रचण्डको टाउकोमा ठूलो दुष्परिणाम पर्न सक्छ
२०७४ असोज २५ गते १९:४५ मा प्रकाशित